Ukuhlolwa kokufakwa nokubuyiselwa kokulahleka - iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukulahleka kwesiginali, okwenzeka ngobude besixhumanisi se-fiber optic, kubizwa ngokuthi yi-insertion loss, futhi ukuhlolwa kokulahleka kokufakwa kukala ukukalahleka kokukhanya kuvela kumgogodla we-fiber optic kanye nokuxhuma kwentambo ye-fiber optic. Ukulinganiswa kwenani lokukhanya okuboniswa emuva ngasemthonjeni kubizwa ngokuthi yi-return loss test. futhi ukulahleka kokufakwa kanye nokulahleka kokubuyisa konke kukalwa ngama-decibel (dBs).
Kungakhathalekile ukuthi hlobo luni, lapho isiginali ihamba ngohlelo noma ngengxenye ethile, ukulahleka kwamandla (kwesiginali) akunakugwenywa. Lapho ukukhanya kudlula ku-fiber, uma ukulahleka kuncane kakhulu, ngeke kuthinte ikhwalithi yesiginali ye-optical. Ukuphakama kokulahleka, inani eliphansi libonakala. Ngakho-ke, ukuphakama kokulahleka okuphezulu, ukwehlisa ukukhombisa futhi ukuxhumana kungcono.
UJera qhubeka nokuhlola kwimikhiqizo engezansi
-Izintambo zokudonsa ze-Fiber optic
-Izintambo ze-patch optical
-Fiber pigtails optical
Ukuhlolwa kokuxhumeka kwe-fiber core kusetshenziswa amazinga we-IEC-61300-3-4 (Method B). Inqubo ye-IEC-61300-3-4 (Indlela C).
Sisebenzisa imishini yokuhlola ekuhlolweni kwekhwalithi yethu yansuku zonke, Ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu angathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi. Ilabhorethri yethu yangaphakathi iyakwazi ukuqhubeka nochungechunge lokuhlolwa okujwayelekile kohlobo.